Celebrating King's Day In The Netherlands (eze) | Save A Train
Home > Travel Europe > Adia Eze Day Na The Netherlands (eze)
Adia King Ụbọchị ke Netherlands nwere ike ịbụ ihe kacha mma otu ke Holland. on 27 April, ha na-eme ememe King Willem-Alexander ụbọchị ọmụmụ na music, n'okporo ámá ọzọ, àkpịrị ahịa, na fun fairs. Eze aga site na mba na ya ezinụlọ. N'abalị ahụ tupu Eze Day, Night’s Night na-eme ememe na egwu na-egosi na Hague na obodo ndị ọzọ na nnukwu flea nke mba ahụ ('Free') ahịa na Utrecht. Njikere chọpụta ihe ọ bụ ihe niile banyere? ebe a bụ ihe mere i kwesịrị Adia King Ụbọchị ke Netherlands.
*Note! Kingbọchị Eze bụ naanị otu ọnwa. Ugbu a bụ oge ị ga-ede akwụkwọ ụlọ nkwari akụ Amsterdam gị maka Ememe Kingbọchị Eze na Netherlands. Visitors nile nke Netherlands, na-esiwanye si mba ọzọ akwụkwọ n'oge iji hụ na ọnụ ụlọ ndị dị.
Kedu ihe dị A AHA?
na mbụ, Princess Day na-eme ememe na Holland na Wilhelmina ụbọchị ọmụmụ (31 August), mgbe ọ ka a Adaeze. The party nwere ọtụtụ akụkụ ya, na nsonye; ọtụtụ ụmụ egwuregwu na mma n'okporo ámá. Mgbe Wilhelmina ghọrọ eze nwanyị ọhụrụ na mgbe nna ya nwụsịrị, ọ gbanwere Queen Ụbọchị.
Juliana, esote eze nwaanyị na Wilhelmina ada, eme ememe Queen Day on 30 Eprel nwere usoro ime njem Soestdijk. Beatrix meekwa ememe ncheta ubochi ndi Nwanyi 30 April (ya ụbọchị ọmụmụ bụ na January) ma megidere nne ya, O wee were ezinụlọ ha dum na gara gburugburu obodo ileta ọtụtụ obodo. King Willem Alexander agbasoro ọdịnala a. A mụrụ ya na 27 April na a ghọrọ ukara Day na 2014 maka Adia King Ụbọchị ke Netherlands.
Oroma niile na Adia King Ụbọchị ke Netherlands!
The Dutch ezinụlọ eze na-agba aha: House of Orange. Nke a pụtara n'ụzọ nkịtị na agba oroma. N'ihi ya, ọ na-Holland si mba agba. On Eze Day, ị ga-ahụ na onye ọ bụla yi oroma n'ụzọ ụfọdụ ma ọ bụ ụdị. Ya mere, nweta shopping!
Mgbe Adia King Ụbọchị ke Netherlands, ndị mmadụ na-ekwe na-ere ihe n'okporo ámá na-enweghị ka a na a akwụkwọ ikike. Free Ahia ahia a na-eme n'ogige ntụrụndụ na n'okporo ámá, na ọtụtụ ndị na-achụ ha achọghị onwunwe, music, ma ọ bụ ntụrụndụ ndị ọzọ maka ire ere. Na-eche banyere ya dị ka a na-arụzi ụgbọala ire, ma na a ukwuu ibu ọnụ ọgụgụ! na Utrecht, akpịrị ahịa ọbụna malite abalị tupu Eze Day. Ya mere ga-esi gị na-eje ije akpụkpọ ụkwụ na.
KA ANYỊ kpere Adia King Ụbọchị ke Netherlands!
ọ bụla oriri na-achọ a tost! Right? On Eze Day, na ndị na-eme a tost eze Orange Ilu, a na-egbuke egbuke oroma mmanya ogbugbu. N'ezie, a na-emekwa na omenala nke yi oroma, oke! The ọṅụṅụ na e kere 1620 usọrọ Prince Fredrick Henry mmeri. Ná mmalite, ọ bụghị a maara nke ọma ma mgbe William of Orange ghọrọ eze mbụ, ọ na-emepụta otu ugboro ọzọ. Kemgbe ahụ, Orange Ilu e-akpachi anya na Dutch ezinụlọ eze.
Gịnị ka anyị na-aṅụ? BIYA, N'EZIE!
Holland hụrụ ha booze na mgbe ọtụtụ iri afọ nke smart ahịa site Heineken, ha Dutch azụmahịa nganga, onye ọ bụla na-ekirikarị na foamy sweet nectar nke chi n'oge Eze Day.
No biya iko na-ekpe full, nweghị uche na-ekpe doro anya. Ọ bụrụ na e nwetụla mgbe a ụbọchị n'ezie ka ntutu isi gị ala, nke a ga-ọ! Na ọ bụghị ihe dị Eze Day, Eze Night tupu bụ ọkara fun. Ọ na-emekarị ka ọrụ ike dị ka Eze Day mwepu ụmụaka na ezinụlọ. Nke a putara na obughi obere ihe iji gbochie mmanya gi, Ma ghari ikwu okwu gi.
Adia King Ụbọchị ke Netherlands bụ bụghị naanị n'ihi na ndị toro eto na-. E nwere ọtụtụ na-eme na-ewere ọnọdụ gafee obodo maka -eto eto na-eto eto obi gụnyere ihu sere, egwuregwu, na sports ihe. Lelee peeji ezumike ezinụlọ nke Day maka ozi ndị ọzọ.
Berlin na The Hague Ụgbọ oloko
Paris na The Hague Ụgbọ oloko
Eze Night & Day Nnọkọ Oriri na Ọṅụṅụ
Adia King Ụbọchị ke Netherlands bụ a ọha ezumike ma na-bụghị a ụbọchị ike. The Dutch, ex-pats, na ndị njem nleta na-enubata Amsterdam maka ụbọchị ememme. The fun omenala amalite na Iv nke nnukwu ụbọchị (Eze Night) ebe ọnọdụ Carnival na-aga n'ihu n'obodo dum na ụbọchị King. Djs egwu ọzọ na n'ámá, ụgbọ mmiri ndị a gbachapụrụ agbachapụ jupụtara n’ọwa mmiri, na egwu egwu na-awusi n'okporo ámá si Cafe patios. Gụkwuo gbasara ihe mere n’ụbọchị King.
Adia King Ụbọchị ke Netherlands na ọwa mmiri
Ọ dịbeghị mgbe gridlock okporo ụzọ a na nke ukwuu fun! On Eze Day, ọtụtụ puku gbaa mma ụgbọ mmiri abịa warara Amsterdam ọwa mmiri. Hot NDỤMỌDỤ. AKWỤKWỌ a ụgbọ mmiri tupu!
Soro na Kingbọchị Eze nke afọ a na Amsterdam na ọwa mmiri dị ịtụnanya awa 1.5 na-aga site na etiti obodo. Iju na gbaa mma ụgbọ mmiri na-enwe na-akparaghị ókè onboard ọṅụṅụ.
Ihe a na-arụ ọrụ:
– Duration 90 nkeji
– Ikwu na akara
– E biri ebi ma ọ bụ mobile ndepụta ego nabatara
– ozugbo nkwenye
– Easy kagbuo
The Dutch, ex-pats, na njem nleta myiri enubata Amsterdam na Adia King Kingbọchị ke Netherlands. Jide n'aka na ị na-atụ uche si na na fun, na akwụkwọ ugbu a iji Save A Train na enweghị ego zoro ezo ma dị mfe dịka 1, 2, 3!
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị a n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ na ị pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fcelebrating-kings-day-netherlands%2F%3Flang%3Dig - (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
#Ndị EzeDay #eze #traveleurope europetravel Train Travel travelamsterdam nje ndi njem traveltips